Ibhonasi Mayan |
Ufuna uthole ezinye imiklomelo esengeziwe? Umkhiqizo ukuthi une Onjiniyela software amageyimu, Ibhonasi Mayan nguye ngawe. Lena ezithakazelisayo khulula spin Slots akhokhe ngocingo sici has umklomelo iqinisekisiwe ngamunye umdlali. The gameplay is very simple but the interface is breathtaking. Imiphumela ingemuva umsindo futhi ukwenza umsebenzi omkhulu lokwengeza injabulo. Umdlalo lumayelana 9 buso ukuthi kwembula zonke ambikele zakho. Amagraphics ngokuqinisekile ongaqondakali futhi kukhona eziningi inhlanhla abathintekayo uma ufuna ukunqoba enkulu kulo. Ingxenye best ukuthi itholakala zonke amakhasino kanye khulula spin Slots akhokhe ngocingo sici lapho ungenza idiphozi ngokuzenzakalela kanye nenani niyozenezelelwa yakho yefoni. Mahhala spin Slots akhokhe ngocingo yindlela enhle ukuba zisindise ngengozi avuzayo iluphi ulwazi ebhange siqu akhawunti ahlobene.
Amazing khulula spin Slots akhokhe ngocingo
Kukhona ezinye izici ezithakazelisayo ngempela Ibhonasi Mayan sengathi kukhona 9 Mask elungiswe kumbuthano esikrinini owembula 9 imiklomelo. Usayizi ukubheja ingakhethwa ngokuchofoza + futhi – asayine esikrinini. Kukhona inkinobho Dlala ukuthi kufanele ucindezele ukuze uqale. I RTP lo mdlalo futhi eliphezulu kakhulu, lathinta mayelana 89.86% okusho ukuthi njalo £ 100 uchitha, lo wanika ziyobuyisela £ 89,86. Ngakho uthole kunoma casino online futhi sisebenzise khulula spin Slots akhokhe ngocingo ukujabulela lokhu ucezu okumangalisayo komsebenzi.
Gameplay salokhu lula kakhulu. Ngokushesha uma uqala, unikezwa ukukhetha ubukhulu ukubheja yakho. Ngemva kwalokhu, wena shaya-Google Play inkinobho. Ungakhetha uchofoze imaskhi ngabanye noma ungavele uchofoze phezu kwembule zonke nkinobho ukubonisa zonke izinto ngesikhathi esisodwa. Uma zembula ezintathu amanani ofanayo umklomelo kulowo mdlalo isizinda, ngeke uwine ukuthi lemali. Ngemva kwazo zonke izinhlupheko 9 Slots uthole efayiliwe, wena uyovula umdlalo ibhonasi. Kulomjikelezo iqinisekisa kokuwina. Ngakho, inani umklomelo imali wena ukunqoba kule niyozenezelelwa Yokuwina yakho Imininingwane. Uye khulula spin Slots akhokhe ngocingo yekhasino futhi uqale ukubheja ngokuphepha.
I slot has ihluzo okukhulu, ovusa nemisindo kanye Gameplay ezithakazelisayo. Ngaphezu kwalokhu, itholakala zokugembula kanye khulula spin Slots akhokhe ngocingo sici. Akukho okuseleyo kusukela IWG entula yimiphi Arenas.